Nciphisa Ukukhathazeka - Izihluthulelo Ezinhle Kakhulu Zokuzithola | Bezzia
USusana godoy | 12/09/2021 18:00 | I-Psychology
Awuqinisekile ukuthi ungakunciphisa kanjani ukukhathazeka? Vele akuyona into elula kakhulu ukuyenza kepha kukithi ukukhetha uchungechunge lwezinyathelo noma okhiye abasisiza ukuba sikwazi ukulawula impilo yethu kanye nengqondo yethu. Ngakho-ke, sikushiya ngosizo olukhulu okufanele ulusebenzise ngokushesha okukhulu.
Kwesinye isikhathi kubonakala kungazelelwe empilweni yethu nalokhu kungaholela ezinkingeni ezinkulu noma ukuhlaselwa ukwesaba esingaba nayo lapho besingakulindelanga. Ngakho-ke, ngaphambi kwakho konke lokho kwenzeka, kufanele singene ebhizinisini. Sekuyisikhathi sokuhlasela inkinga ngendlela engcono kakhulu esazi ngayo.
1 Beka phambili njalo empilweni yakho
2 Ungakhathazeki kakhulu
3 Hlala uveza imizwa yakho
4 Thatha isikhathi usuku ngalunye
5 Phumula ngokwanele ukuze unciphise ukukhathazeka
Beka phambili njalo empilweni yakho
Kunezinto ezingenakwenziwa kusuka osukwini olulodwa kuye kolandelayo, ngakho-ke, kufanele sithathe izinyathelo ezincane kepha eziphephile. Enye yezinto ezibaluleke kakhulu yile. Ukukhathazeka kubonakala lapho sesivele sigcwele ingcindezi, lapho singasakwazi ukukuthatha futhi izinzwa zethu seziphezulu. Ngakho-ke, kungcono ngaso sonke isikhathi ukuma bese ucabanga. Ngoba isisekelo sakho konke ukubeka kuqala okubaluleke kakhulu futhi kufanele sikwenze. Okungafanele, kungalinda ngoba impilo yethu iza kuqala. Ngakho-ke, isisekelo sezinsuku zethu sisenhlanganweni.
Uma ungafiki ngesikhathi ukufeza konke obukucabanga, ungakhathazeki. Ngoba sonke sinemikhawulo futhi akufanele yeqe uma singazi vele ukuthi yini esilindeleyo. Kungcono ukucabanga kahle, ngoba uma unesisombululo, kusisiza ngani ukukhathazeka kangaka? Futhi uma ungenayo, lapho-ke akudingekile. Kufanele sivumele leyo micabango emibi igeleze ngoba uma kungenjalo izolala emakhanda ethu futhi kuzoba nzima kakhulu ukuqhubekela phambili.
Hlala uveza imizwa yakho
Lokho kokushiya esikuzwayo kumzuzu ngamunye ngaphakathi akuyona into enhle futhi. Ngakho-ke, ukukhipha ngaphandle kulula ngaso sonke isikhathi. Uma ukwazi, akukho okungcono kunokuhlala nezihlobo zakho noma labo bantu abakhethekile onabo empilweni yakho. Uma kungenjalo, akukho okufana nomuntu onguchwepheshe ozokunikeza izeluleko ezinhle kakhulu. Kepha ngandlela thile uzozizwa ungcono kakhulu uma uwukhipha kunokuba ungawushiyi ngaphakathi. Impela usuyayazi, kepha akulula ngaso sonke isikhathi ukuyisebenzisa futhi siyayazi. Uma kukubiza, qala uzame ukubhala imizwa futhi uzobona ukuthi kuyisinyathelo sokuqala ukuzizwa ungcono.
Thatha isikhathi usuku ngalunye
Ungahle ungabi nesikhathi esiningi kepha okuhle ukuthi kufanele ngaso sonke isikhathi sibe nemizuzu embalwa kithi. Kuzona ungenza lokho okuthanda kakhulu, kusukela ekudlaleni umdlalo kuya ekulaleleni umculo. Okuthile okukwenza uzizwe ungcono, kukukhulula, futhi kukunikeze amandla anele okuqhubeka. Njengoba ukwazi ukubona, akudingeki ukuthi uthathe izinyathelo eziyinkimbinkimbi, kodwa ukwenza umzamo omncane nsuku zonke ukufeza lokho okuthenjisiwe. Futhi isikhathi sethu siningi.
Phumula ngokwanele ukuze unciphise ukukhathazeka
Vele, abantu abafuna ukunciphisa ukukhathazeka abahlali belala kahle ebusuku. Ukuqwasha kungenzeka kube khona futhi kungenye ingxenye engemihle ukuze ukukhathazeka kuqhubeke kube yinkinga. Ngakho-ke, kufanele sakhe imikhuba ethile nsuku zonke, lokhu kufanele kugcinwe endabeni yamashejuli. Ngoba kuphela lapho umzimba uzojwayela kangcono kakhulu. Kepha yebo, lapho sikuthola kunzima ukulala, kufanele sisebenzise izinyathelo kubantu abadala njengokungabi nesidlo sasebusuku esiningi, ukugeza okuphumuzayo ngaphambi kokulala noma ukucisha zonke izinhlobo zamadivayisi. Uzobona ukuthi ngale ndlela nangesibalo sezinyathelo zonke, unganciphisa ukukhathazeka futhi ufunde ukubeka izinkathazo zakho eceleni kancane.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Psychology nezithandani » I-Psychology » Izindlela zokunciphisa ukukhathazeka